Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /customers/0/9/6/barqamaal.com/httpd.www/wp-includes/compat.php on line 502 Rabitaanka cusub ee dakadaha Somalia – Barqamaal
Qore: Abdulgadir (Badhawe) Aden Hussein
Asc: Mudo ayaan isweydiinayey maxaa aduunka ku cusub oo loogu tartamayaa dakadaha Somalia. Halkaan waxaan iniin kugu soo bandhigayaa qoraal aan soo gaabiyey, oo aan filayo inuu inoo iftiimiyo arin aan isleeyahay waxay sabab utahay rabitaanka dakadaha Somalia.
Wadanka Shiinaha iyo Bakistaan waxaa ka dhexeeya xiriir aad u wanaagsan, waxayna labada wadan diyaarinayaan dakadii aduunka ugu waynayd iney ka dhisaan magaalada la yiraahdo Gwadar ee ku taal xeebta biyaha loo yaqaan carabiyaan sii (Arabian Sea) ee koonfurta Bakistaan, magaaladaas oo hada leh dakad ay dhistay wadanka shiinuhu.
Gwadar dakada hada ku tal waxay ahayd wajigii koowaad, wajiga labaad markii uu dhamaado, waxaa labadaas wadan ku talagaleen in Gwadar ay noqoto isha dhaqaalaha ee aduunku ganacsiga u aado. Markaad fiiriso meesha ay Gwadar ku taal, waxaad arkeysaa in Gwadar ay ku taal xeebta Arabian Sea, biyaha xeebtaasu waxay dhinaca waqooyiga uga
aroortaa biyaha layiraahdo Red Sea ee ay ku yaaliin wadama badan oo Carab ah, biyahaas Red Sea waxaa waqooyi ka xiga biyaha loo yaqaan miditereeniyaan (Mediterrenian Sea). Koonfurta xeebta Gwadar waxaa ku yaala biyaha loo yaqaan indiyaan ooshiyaan(Indian Ocean). Biyaha Indian Ocean ku waxay ku arooraan labada badood ee waawayn loona yaqaan Atlantic Ocean iyo Pacific Ocean.
Gwadar waxaa muuqata iney leedahay fursad ay aduunkoo dhan ganacsi lasamayso markii qaybta labaad ee dhismaheedu dhamaado, iyadoo Gwadar adeegsaneysa biyaha iyo badaha aduunka, hadaba markaad si fiican u fiiriso xeebta dheer ee ay Somalia leedahay waxaa hubaal ah in wadama badan isku dayayaan sidii ay xeebaha Somalia ula wareegi lahaayeen. Waxaan filayaa in rabitaanka cusub ee xeebaha Somalia lagu doonayo in lagula wareego ay salka ku hayso qorshaha Gwadar ee ay ku heshiiyeen labada wadan ee Bakistaan iyo Somalia.
Hadaba, Sidee qorshahaas Somalia ula qabsan doontaa?.???